Yamaha Tricker ဆိုင်ကယ် ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Yamaha Tricker 2015
Lks 54 ညှိနှိုင်း
Grey ရောင် Yamaha Tricker အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Manual ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 250 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပညာမ...
Orange ရောင် Yamaha Tricker အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Manual ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 250 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပည...
2015 Yamaha Tricker
Lks 56 ညှိနှိုင်း
STH Motorbike Shop
Yamaha supplies only the best quality vehicles and this car is yet another example from their impressive fleet. This new Yamaha Tricker 2015 comes withaManual transmission system and is excep...
This new Orange Yamaha Tricker 2014 isamust-have. This car comes withaManual transmission as well as other great features. Priced at 50 Lks, this car will be snapped up in no time so make s...